Saadaalinta - Shabakada Saadaasha Hawada | Saadaasha Websaydhka (Bogga 2)
Haddii aynaan joojin joojinta kuleylka adduunka, waxaa jiri doona 60 kun oo dhimasho dhicis ah sanadka 2030-ka
Cimilada sii kululaaneysa ayaa ah qatarta ugu weyn ee aan wajaheyno. Haddii aynaan joojin waqtiga, waxaa jiri doona 60 dhimasho dhicis ah sannadka 2030-ka.
Heerkulku wuxuu kici karaa 2 iyo 5 darajo dhammaadka qarniga
Haddii aan dadaal dhab ah la samayn si looga fogaado, heerkulka celceliska adduunka ee dhammaadka qarniga wuxuu kici karaa 2 illaa 5 darajo.
Kulaylka adduunku wuxuu u horseedi karaa kororka cudurrada cudurrada keena ee Yurub
Maaddaama celceliska heerkulka adduunku kor u kacayo, fayrasyada, bakteeriyada, fungi iyo cudur-keenayaasha kale waxay halis gelin karaan caafimaadka reer Yurub.
Lama-degaanku wuxuu khatar gelin karaa beeraha dalkeenna muddada dhow iyo muddada dhexe. Waxaan kuu sheegeynaa talaabooyinka ka hortagga ah ee la qaadi karo.
Mid Weyn. Magac loo bixiyay dhulgariirkii ay saynisyahannadu rajaynayeen inuu maalin uun ku dhufan doono Gobolka Kalifoorniya. Aad iyo aad u dhow.
Waqooyiga Afrika waxaa u rogi kara cagaar isbadalka cimilada
Kordhinta kaliya laba darajo Celsius, Waqooyiga Afrika waxay ka tegi doontaa inay noqoto lama degaan una noqoto geedo dhowr sano gudahood.
Kuwani waxay ahaayeen ereyadii falanqeeye falanqeeye falanqeeye falanqeeyaha falanqaynta falanqaynta xiddigiska Stephen Hawking. Bini'aadamnimada ayaa laga yaabaa inay tiriso maalmihiisa haddii ay ku sii noolaato Dunida.
Waxaan gareynaa heer aan la macaamili doono dhacdooyinka aadka u daran. Anaguna waxaan haysanaa 3 sano oo keliya si aan uga fogaanno aafada cimilada.
Sida roobka looga filan karo dhaqanka xoolaha
Xaqiiqooyinka muhiimka ah ee ku saabsan xayawaannada saadaaliya roobka dabaylaha wata duufaanka culus dabeecadooda darteed, iyo gobollada kala duwan.
Xaaladda ugu xun, dhammaadka qarniga 74% dadka adduunka waxay la kulmi karaan mowjado kuleyl dilaa ah.
Xagaaga 2017 ma noqon doonaa kan ugu kulul Spain? Aad ayey macquul u tahay. Heerkulku wuu ka badnaan karaa qiimaha caadiga ah sanadaha kale guud ahaan dalka.
Goorma ayuu qabowgu soo galayaa? Waxaan kuu sheegeynaa sida jiilaalka 2017/2018 noqon doono. Sida laga soo xigtay AEMET, heerkul ka diiran sida caadiga ah ayaa la filayaa in la duubo. Laakiin weli wax badan ayaa ...
Ardaaga weyn ee loo yaqaan 'Larsen C shelf' ee ku yaal Antarctica ayaa jabaya
Ardaaga barafka ee Larsen C ayaa dhowaan jebin doonta: waxay waayi kartaa 10% dusha sare si ay u sameyso buur baraf ugu weyn taariikhda.
Saacadaha la seexdo waxaa saameeya isbeddelka cimilada
Dhibaato ma kugu haysaa hurdada? Daraasad ayaa sheegtey, markii meeraha kululaado xaaladan ka sii darayso meeraha oo dhan. Soo ogow sababta.
Miami waxay gali kartaa biyo kahor dhamaadka qarniga
Miami waa magaalo xeebeed halkaas oo ay ku nool yihiin malaayiin dad ah oo noloshoodu khatar ugu jiri karto sare u kaca heerarka badda.
Ameerika waxaa laga yaabaa inay ka dhammaato barafka dhammaadka qarniga
In kasta oo Donald Trump uu shaki ka qabo kuleylka adduunka, barafka waddankiisa waa la waayi karaa dhammaadka qarniga.
Badda Dhimatay waa meel qatar ugu jirta in la waayo isbadalka cimilada darteed. Laakiin sababta? Kaalay oo anagaa kuu sheegeyna.
Miyaad u maleyneysaa in Amazon ay ka badbaadi doonto heerkulka sii kordhaya iyo xaalufinta? Gali oo waxaan kuu sheegi doonaa waxa ku dhici kara sambabka meeraha.
Dhul gariir waaweyn ayaa badanaa ka dhaca Chile, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa goobta xigta "dhulgariirkii qarniga". Laakiin sababta?
Iyada oo darajo kasta oo kululaaneysa, ku dhowaad 4 milyan oo kilomitir oo laba jibbaaran ee permafrost ayaa lumay
Maaddaama heerkulka kor u kacayo dhulka, ku dhowaad 4 milyan oo kiilomitir oo laba jibbaaran ee permafrost ayaa lumay, taas oo ka weyn cabbirka Hindiya.
Waxaan kuu sheegi doonaa sida loo filayo xilli duufaaneedka 2017. Xilli la filayo inuu ka xoog badnaado kii ka horreeyay.
Cadaadiska kuleylku wuxuu ka mid noqon doonaa dhibaatooyinka marka meeraha kululaado, ilaa heer ay saameyn ku yeelan doonto 350 milyan oo qof oo dheeraad ah.
Kulaylka adduunku wuu yarayn karaa naasleyda
Maaddaama heerkulka meeraha Dunida, cabbirka naasleyda hoos u dhici karto. Laakiin sababta? Gali oo waan kuu sheegi doonaa.
Celceliska heerkulka adduunka ayaa sii kordhaya, laakiin Mareykanka ayaa la kulmi kara koror ah 2ºC ama in ka badan sannadka 2050, inta ka horreysa adduunka intiisa kale.
Daadad baaxad leh oo ka dhaca Yurub ayaa soo noqnoqon doona dhammaadka qarniga
Daadad baaxad leh ayaa ku soo noqnoqon doona Yurub marka la gaaro 2100. Laakiin waa maxay sababtu? Gali oo soo ogow inta uu kor u kici doono heerka badda gobolkan.
Ma jeceshahay inaad ogaato waxa gu'ga 2017 noqon doono? Hadday sidaas tahay, soo gal oo waxaan kuu sheegi doonaa waxa ay tahay cimiladu saddexda bilood ee soo socota.
Qaxootiga cimilada waxay tiradoodu noqon doontaa malaayiin sanadka 2050-ka
Bartamaha qarniga, dhowr milyan oo qof ayaa lagu qasbi doonaa inay ka baxaan dalkooda. Waxay noqon doonaan qaxooti cimilo ah.
Isbaanishka waxaa laga yaabaa inay ka dhamaato shakiga barafka leh ee ka dhashay kuleylka adduunka
Isbaanishka ayaa laga yaabaa inay ka dhamaato shaki badan oo baraf ah kaliya afartan sano oo ay sabab u tahay kororka heerkulka.
Sida laga soo xigtay daraasad lagu daabacay joornaalka Isbeddelka Cimilada, kulaylka dunidu wuxuu ka goynayaa maalmo heerkulka ugu habboon meelo badan oo adduunka ah.
Heerkulka ayaa hoos u dhici doona Spain laga bilaabo berri
Laga bilaabo berrito, jimcaha, imaatinka duufaan qabow oo ay weheliso dabaylo aad u xoog badan oo ka tagi kara baraf weyn ayaa la filayaa.
2017 way diirnaan doontaa, laakiin ma noqon doonto rikoor
Sida laga soo xigtay saadaasha UK Met Office, 2017 waxay noqon doontaa sanad diirran, laakiin heerkulka diiwaanka lama gaari doono.
Heerkulka Antarctica wuxuu kici karaa 6 darajo dhammaadka qarniga
Daraasad cusub ayaa lagu sheegay in heer kulka Antarctica uu kor u kici doono 6 darajo dhammaadka qarniga; laba jeer ka badan adduunka intiisa kale.
Cimilada sii kululaaneysa ayaa sababi doonta duufaano hor leh oo ka dhaca Mareykanka
Sida lagu sheegay daraasad cusub, ka hor dhammaadka qarniga waxaa ku soo badanaya Mareykanka duufaanno, gaar ahaan gobolka Mississippi delta.
Sidee u dhici doonaa?
Kadib xagaaga oo kulul, sidee ayuu noqon doonaa? Marka loo eego AEMET, waxay noqon doontaa wax ka duwan wixii aan ku baran jirnay. Waan kuu sheegi doonaa.
Ma jeclaan lahayd in cimiladu qabowdo mar hore? Hadday sidaas tahay, maahan inaad sugto waqti dheer. Toddobaadkan dhammaadkiisa hoos u dhac ilaa 9 digrii ah ayaa laga filayaa Isbayn.
Cimilada sii kululaaneysa waxay noo keenaysaa sanado ka sii diiran oo ka sii kulul. Maxaa ku dhici doona xilliyada? Dhimashada xilliga qaboobaha ayaa dhowaan iman kara.
Fiiro gaar ah u yeelo oo faahfaahin ha ka lumin 5ta xaqiiqadood ee ku saabsan diirimaadka adduunka ee meeraha oo dhan tabaalaysan.
El Niño ka dib, waxaa soo baxaysa La Niña, oo ah dhacdo qaboojin doonta biyaha Baasifigga, beddeli doonta cimilada meeraha oo dhan. Gali si aad waxbadan uga ogaato.
Dhibaatooyinka ba'an ee isbeddelka cimilada ayaa sababaya noocyo badan oo amphibians ah inay si dhakhso leh uga dhammaanayaan wajiga Dunida.
Sanadka 2016 heerkulka wuxuu kordhin doonaa 1 ilaa 2 darajo marka loo eego celceliska
Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah khubarada saadaasha hawada, inta lagu jiro sanadka 2016 waxaa jiri doona kor u kac heer kulka ah 1 ilaa 2 digrii marka loo eego celceliska.
Khariidadda Dabaysha Dhulka, khariidad cimilo isku dhafan iyo is dhexgal ah
Codsi kombuyuutar cusub, Dhulka Khariidadda Dabaylaha, oo laga arki karo internetka isla markaana ay heli karaan dhammaan dadka isticmaala, ayaa noo oggolaanaya inaan u fiirsano qaab muuqaal ah, qurux ahaan qurux badan iyo, waxa ka sii muhiimsan, xog cusub oo la cusbooneysiiyey oo ku saabsan dabeylaha hawada ka socda guud ahaan meeraha.